Keep …. & Vote … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Politics, Issues » Keep …. & Vote …	8
Keep …. & Vote …
Posted by မြစပဲရိုး on Oct 26, 2015 in Politics, Issues | 8 comments
အနားက တစ်ယောက် သူ့ မျက်နှာစာ ထဲ ပေါက်ကွဲ ထားတာ။
သများ ပယောဂ ကင်းပါတယ်။
သွသူ မြန်မာပြည်ထဲက ဟိုဟို ဒီဒီ မိန့်ခွန်း တွေ ကို မျိုးစုံ ယှဉ်တွဲ နားထောင် အပြီး မခံစားနိုင်တော့ ဘူး ထင်ပါရဲ့။
ဟိုမရောက် ဒီမပါ ကနေ အဲ ဂလို ဖစ်သွားတာ။ lol:-)))
မြစပဲရိုး says: To The Point: Aung San Suu Kyi On Upcoming Burma Elections
မြစပဲရိုး says: အနီ ကြိုက်နေပါတယ် ကွယ်။ မစိမ်း တာ ကျေးဇူးပါ။ :-)))
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒီ အနီရောင် လူပင်လယ်ကြီးကို ကဘာ က မြင်ပြီးတာမို့
အမေ့ လုပ်ချက် ဖွတ်အသက်ထွက်။
Mike says: .ရဲရဲတောက်တို့ဗမာတွေ…သတ္တိခဲတွေ
Ma Ma says: ဒီနှစ်အတွက် အကြိုက်ဆုံးသီချင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: ယူအက်စ်မှာလည်း.. CBS တီဗီကနေ ဒေါ်စုအင်တာဗျူးတာမနေ့ကလာတယ်..။
naywoon ni says: အရီး​ရေ ကျုပ်​လည်း အနီ ​ရောဂါ ထ​နေသဗျ ။ မိန်းမယူရင်​​တောင်​ နာမယ်​မှာ နီ ပါမှ ယူမယ်​ စိတ်​ကူး​နေဘီ ။ အာဟိ ဖျာဝင်​ခင်းကျိတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အဘနီ ရဲ့ နီ Family မကြာခင် ဖြစ်ပါစေ ရှင်။ :-))